कठघरामा मानव अधिकार आयोग – HostKhabar ::
कठघरामा मानव अधिकार आयोग
२४ मंसिर २०७६, मंगलवार
२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मानव अधिकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन शान्ति समाजका साथीहरूसँगै म प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेको थिएँ। उक्त भेटमा मैले मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गर्नुपर्छ के भनेको थिएँ, ‘पहिला तपाईं बिहे गर्नुस्, सबै हुँदै जान्छ’ भनेर देउवाले ठट्टा गर्नुभयो।
त्यहाँ उपस्थित सबै गलल हाँसे। यद्यपि देउवा सहज स्वभावका हुनुहुन्छ। तर, चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलालाई मन्त्री-राज्यमन्त्री बनाएर देउवाले इतिहास बनाउन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँ चुक्नुभयो। महिला समानता र सशक्तीकरणका पक्षमा गफ गरेर नथाक्ने प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाउनु भएन। त्यसैले होला जनस्तरमा टिप्पणी बढ्न थालेको छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका।’
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भागबण्डाको झगडामा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच चलिरहेको ‘शीत संघर्ष’ केहीअघि मिलापत्रमा टुंगिएजस्तो देखियो। त्यसको फेहरिस्त बोकेर दुवै अध्यक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न गए।
दलको मामलामा राष्ट्रपतिको अनावश्यक संलग्नता मर्यादाविपरीत भयो भन्दै आलोचना पनि भयो। दुई अध्यक्षबीचको सहमतिको तमसुकमा केके लेखियो प्रस्ट नभए पनि राष्ट्रपति फट्के किनाराका साक्षीका रूपमा चित्रित हुन पुग्नुभयो।
वर्तमान संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपति भनेको ‘सेरमोनियल’ अर्थात् आलंकारिक पद हो। तसर्थ राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक सक्रियता र हस्तक्षेपकारी भूमिका कल्पना गर्न सकिँदैन। तर लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशिताजस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले आफ्नो सीमाभित्र रहेर शिष्टताका साथ ध्यानाकर्षण गराउने ठाउँ हुन्छ।
मैले सोचेको थिएँ, आफूलाई भेट्न आएका सत्तारूढ नेकपाका दुईजना अध्यक्षलाई राष्ट्रपति महोदयले अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा कम्तीका ३३ प्रतिशत महिला समावेश गरेर ल्याउन भन्नु हुनेछ, तर कुनै बेला महिला मुक्तिका गीत गाउने राष्ट्रपतिले त्यसो भन्नुभएन।
शपथ ग्रहणका लागि २५ जना मन्त्रीमा जम्मा दुईजना महिलालाई समावेश गरेर पठाएको मन्त्रिमण्डल सूची हेर्नासाथ राष्ट्रपति महोदयले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपथ्र्यो– यो त भएन। महिला सशक्तीकरण र समावेशिताका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर हो यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन सक्नुपथ्र्यो। तर राष्ट्रपतिको रुचि समावेशी र महिला सशक्तीकरणमा भन्दा सत्तारूढ नेकपाभित्रको घर–झगडा र किचलोमा ज्यादा देखियो।
मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकार, संयन्त्र-निकाय, संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसमा पनि सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ। वर्तमानमा पनि महिलालाई बोक्सी भन्दै कुटपिट र लाञ्छित गर्ने घटना भइरहेका छन्।
महिलामाथि हिंसाको कहालीलाग्दो सिलसिला निरन्तर छ। एकातिर संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरेको छ भने अर्कातिर आयोगको पद रिक्त छ। यद्यपि आयोगहरू बन्दैमा प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रत्याभूति छैन तर पनि सास छउञ्जेल आस रहन्छ।
वर्तमान सरकारले मध्यरातमा सातवटा प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एउटै निर्णयबाट अपमानजनक ढंगले बर्खास्त गर्‍यो तर रिक्त महिला आयोग गठन गर्नमा राज्य-सरकारको रुचि देखिएन। कागजमा छुवाछूत अन्त्य भएको दशकौं भइसक्यो तर दलितहरूले कुटाइ खाइराख्ने र कुट्ने ठालु पल्टेर हिँडिराखेको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ।
पुराना राजदूतहरूलाई अपमानजनक ढंगले फिर्ता बोलाउने र त्यो ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सरकार रिक्त रहेको राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गर्न इच्छुक देखिएन। जतिसुकै क्रान्तिको गुड्डी हाँके पनि नेकपाका नेताहरू दलित मुक्ति र उत्थानका लागि गम्भीर देखिएनन्। सत्ताका लागि लुछाचुँडी देखियो तर समाज रूपान्तरणका लागि दृढ इच्छाशक्ति देखिएन।
विगत तीन दशकमा राजनीतिक क्षेत्रमा देशले ठूलो फट्को मारेको छ। तर आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका सबालमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएन। पुस्तक आयातमा कर बढाउने सरकार मदिरा आयातमा उदार छ। इन्टरनेट महँगो बनाउने सरकार चुरोट सस्तो बनाउन लम्पसार छ।
राजनीतिक व्यवस्था-सत्ता पटकपटक परिवर्तन भए तर सामाजिक सत्तामा ऐंजेरु भएर पलाएको विकृतिलाई निमिट्यान्न पार्ने काम पूर्णरूपमा भएन।
मानव अधिकारका सवालमा जति पनि नेतृत्व आए, मानव अधिकार संरक्षणका खातिर दृढ इच्छाशक्तिको परिचय दिन सकेनन्। पीडितहरूले न्याय नपाउँदाको पीडा एकातिर छ भने पीडकहरू पटकपटक पुरस्कृत भएको पीडा अर्कातिर छ।
दण्डहीनता निरन्तर संस्थागत हुँदै गइरहेको छ। यसमा दोष सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रिय संयन्त्र-निकायहरूको पनि धेरथोर छ।
नेपालमा आज पनि मानव अधिकार शब्द जोडिएका जुनसुकै संस्थाले कार्यक्रम गर्दा त्यो एउटै मानव अधिकार संस्था होला वा एउटै संस्थाको अंग होला भन्ने धारणा कतिपयमा व्याप्त छ। त्यसैले एउटाको बदमासीका कारण अर्काले मार खप्नुपरेको उदाहरण पनि छन्।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा सबै मानव अधिकार संस्थाहरू पारदर्शी, आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी नबन्दा गाली गर्ने र आरोप लगाउनेहरूको स्वर बढ्दो छ। नागरिकका अधिकार रक्षाका खातिर काम गर्ने केही संस्थाहरूले मानव अधिकारको मान्यताभन्दा पर घृणा र विखण्डनको पृष्ठपोषण गर्दा नागरिक नजरमा अभियुक्त भइसकेका छन्।
एकहत्तरौं मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बरमा मनाइरहँदा विगतमा कहाँ चुक भयो ? मानव अधिकारवादी दावा गर्ने सबै संस्था र व्यक्तिहरूले पुनरावलोकन गर्नु राम्रो।
राष्ट्रिय संयन्त्रको कुरा गर्दा संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना गर्न २३ वर्षअगाडि संघर्ष गर्दाको घटना याद आयो। २०५३ पुसमा ऐन बनेको झण्डै ४१ महिनापछि २०५७ जेठमा बल्ल आयोग गठन भएको थियो। यो दुई दशकमा आयोग र विवाद एकअर्काका पर्यायवाची भए। कतिपय कठिन अवस्थामा आयोगले अडान छाड्यो त कतिपय जटिल अवस्थामा आयोगले खुट्टा टेक्न सकेन।
२०६० माघमा नेकपा एमालेका एकजना पूर्वसांसद सिरहामा मारिए। आयोगको टोली पनि गयो तर प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न सकेन। तत्कालीन नेकपा एमालेले आफंैले तथ्य संकलन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन।
त्यसबेला एमालेका शीर्ष नेतृत्व मसँग भन्ने गर्थे— भविष्यमा हाम्रा नेताकार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि पनि यो घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
मानव अधिकारको सवालमा जति पनि नेतृत्व आए मानव अधिकार संरक्षणका खातिर दृढ इच्छाशक्तिको परिचय दिन सकेनन्। पीडितहरूले न्याय नपाउँदाको पीडा एकातिर छ भने पीडकहरू पटकपटक पुरस्कृत भएको पीडा अर्कातिर छ। दण्डहीनता निरन्तर संस्थागत हुँदै गइरहेको छ। यसमा दोष सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रिय संयन्त्र-निकायहरूको पनि धेरथोर छ।
एमाले शीर्ष नेताहरूका बारम्बारको अनुरोधपछि उक्त घटनाको अनुसन्धान–अध्ययन गर्न मेरो नेतृत्वमा शान्ति समाजको अनुसन्धान टोली सिरहा पुगी घटनामा संवेदनशील सुरक्षा निकायको संलग्नताको प्रमाणसहित सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
यस क्रममा हामीलाई पूर्वमन्त्री एवं राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्णचरण श्रेष्ठले पनि आफूले थाहा पाएको तथ्य बताउनुका साथै केही प्रत्यक्षदर्शीसँग भेटाउने कार्यमा सहयोग गर्नुभएको थियो। सो प्रतिवेदनका कारण हामीले भोग्नुपरेका कठिनाइको कहालिलाग्दो कथा लामो छ।
सिरहाका लोकप्रिय नेता एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्रेष्ठको २०६३ सालमा सन्दिग्ध परिस्थितिमा हत्या भयो। हत्याको जिम्मेवारी एउटा मधेसी सशस्त्र समूहले लिए पनि पर्दापछाडि को थियो, रहस्योद्घाटन हुन सकेको छैन। किनकि त्यसपछिका लोकतान्त्रिक सरकारहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न चाहेनन्। उल्टो, श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न एकजना कुख्यात अपराधीको २०६९ सालमा सरकारले गुपचुपमै मुद्दा फिर्ता लियो।
त्यसपछि एमाले आधा दर्जन बढी पटक सरकारमा पुग्यो। तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्‍यो तर आफ्नै पूर्वसांसद हेमनारायण यादव मारिएको घटनाका दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन। मानव अधिकार दिवसका दिन प्रधानमन्त्रीको कहिले सन्देश कहिले उपदेश सुन्न पाइन्छ।
एकहत्तरौं मानव अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव, पुरानै सन्देशहरूलाई कट पेस्ट गरेर दोहोर्‍याउनुभन्दा मानव अधिकार संरक्षणका लागि कार्ययोजनासहित दण्डहीनता अन्त्य गर्ने ठोस खाका प्रस्तुत गर्नु राम्रो।
मानव अधिकार आयोगका कुरा गर्दा, केही अगाडि सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माको अभिव्यक्ति मर्यादाविपरीत भएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। यो कुनै सामान्य राजनीतिज्ञको नभएर संविधानसभाको अध्यक्ष-सभामुख भइसकेको व्यक्तिको आरोप थियो।
तत्पश्चात् मैले सञ्चारमाध्यम-युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा आयोग अध्यक्ष शर्माका अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएर हेरें। नभन्दै नेम्बाङले लगाएको आरोप सही ठहरियो। प्रधानन्यायाधीश भइसकेका आयोगका अध्यक्षले विपक्षी दलको नेताहरूले भन्दा चर्को र भद्दा तवरमा सरकारविरोधी भाषण गर्नु आयोगको मर्यादाअनुकूल छ-छैन भन्ने हेक्का राख्नुपथ्र्यो। तिनै कुरा सभ्य र शिष्ट ढंगले भन्न सकिन्थ्यो। यसबाट सरकार र आयोगबीच दूरी बढेको प्रस्ट हुन्छ। यसै पनि आयोगले नीतिगत रूपमा र पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा गरेका गल्तीको फेहरिस्त लामो छ।
मानव अधिकार उल्लंघन र अन्य अपराधका घटनाको प्रकृति फरक हुन्छ। मानव अधिकार संस्था-निकायले उल्लंघनका घटनामा छानबिन गर्छन् जबकि अन्य अपराधका घटनाको छानबिन अनुसन्धान गर्ने दायित्व प्रहरीलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको हो।
केही मानव अधिकार संस्थाले जस्तै संवैधानिक मानव अधिकार आयोगले पनि सीमा नाघेर अपराधका घटनामा बोल्दा र हस्तक्षेप गर्दा चिप्लिएको छ। कुनै बेला आयोगका अध्यक्ष शर्माले आयोगकै कार्यकक्षमा घृणा र विखण्डनको अभियानमा संलग्न पात्रलाई भेटेको घटनाको तीव्र निन्दा भयो। मानव अधिकार संस्था-निकायमा बस्नेहरू प्रतिशोध साँध्न अरूलाई थुनाउने कुकर्म गर्दैनन्।
तर मानव अधिकार आयोगका एकजना पूर्वअधिकृतले आयोगभित्रको अराजकता र अनियमितताका बारेमा बोलेको र ‘मानव अधिकार आयोग बचाउ नागरिक अभियान’ थालेका कारण आयोग स्वयंको निर्णयअनुसार आयोगका सचिवका नामबाट प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरी निजलाई पक्राउ गर्न दिएको दबाब लज्जास्पद एवं आयोगको मर्यादाविपरीत थियो।
कतिसम्म भने आयोगकी एक पदाधिकारीले महानगरीय प्रहरीपरिसर कालिमाटीमा अनुगमनको आवरणमा गई त्यहाँका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसमक्ष आयोगका ती पूर्वअधिकृतलाई पक्रन दबाब दिएको घटनाले मानव अधिकार रक्षकको दृष्टिमा आयोगका पदाधिकारी आफैं अभियुक्त बन्न पुगे। यस्ता घटना दर्जनौं छन्।
एकहत्तरौं मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोग स्वयंले अरूलाई उपदेश दिनुभन्दा आफ्ना गल्ती, कमीकमजोरी केलाई सच्चिनु राम्रो। पीडितका पक्षमा काम गर्ने आयोग आफैं पीडक बन्नु हुँदैन।
तर सायद यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ आयोगसँग छैन न त आफ्ना कमजोरीबारे नागरिक स्तरमा बहस गर्न सक्ने आँट आयोगसँग छ। विश्व मानव अधिकार दिवसका दिन कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहेको आयोगका पदाधिकारीहरूले यी प्रश्नको जबाफ दिन सके बेस। कान्तिपुर
बतास नाचेको त्यो साँझ र चलिरहेको यो समय
बाबा विनाका वर्षदिन
युट्युबरले कहाँबाट पाए शिक्षकलाई अपमान गर्ने अधिकार ?
महिला शसक्तिकरण अहिलेको आवश्यकाता : दलित मुक्ति अभियान केन्द्रीय उपाध्यक्ष परियार
काल नजिक आएपछि मान्छेको मतिभ्रष्ट हुनेगर्छ : पूर्वसचिव उपाध्याय